Isaya 27 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
27 Ngaloo mini uYehova,+ ngekrele lakhe elilukhuni nelikhulu nelomeleleyo,+ uya kuphethulela ingqalelo yakhe kwiLeviyatan,+ inyoka enyebelezayo,+ kuyo kanye iLeviyatan, inyoka egwenxa, yaye ngokuqinisekileyo uya kusibulala eso silo sikhulu saselwandle.+ 2 Ngaloo mini,+ vumani ingoma nithi: “Isidiliya+ sewayini ebilayo! 3 Mna, Yehova, ndingumlondolozi waso.+ Ndiya kusinkcenkceshela mzuzu ngamnye.+ Ukuze kungabikho bani uphethulela ingqalelo yakhe nxamnye naso, ndiya kusilondoloza ubusuku nemini.+ 4 Andinamsindo.+ Ngubani na oya kundinika amatyholo anameva+ nokhula edabini? Ndiza kunyathela kuzo. Ndiza kuzitshisa ngaxeshanye.+ 5 Kungenjalo makabambelele egwibeni lam, makaxolelane nam; makaxolelane nam.”+ 6 Kwimihla ezayo uYakobi uya kumila ingcambu, uSirayeli+ uya kutyatyamba aze okunene ahlume; baya kusuka bazalise ilizwe elinemveliso ngemveliso.+ 7 Ngaba kuya kufuneka abethwe njengokubetha kwalowo umbethayo na? Okanye ngaba kuya kufuneka abulawe njengokubulala ngogonyamelo kwabo babuleweyo bakhe na?+ 8 Ngesikhalo esoyikisayo uya kusukuzana naso ekusithumeleni. Umele asigxothe ngokufutha kwakhe, okunamandla ngemini yomoya wasempuma.+ 9 Ngoko ke ngale ndlela isiphoso sikaYakobi siya kucanyagushelwa,+ yaye siso sonke esi isiqhamo xa esuse isono sakhe,+ xa ewenza onke amatye esibingelelo abe njengamatye ekalika aye acolwa, khon’ ukuze izibonda ezingcwele+ neziganga zeziqhumiso zingaphakami.+ 10 Kuba isixeko esinqatyisiweyo siya kuba sodwa, idlelo liya kushiywa lodwa yaye liya kushiywa njengentlango.+ Ithole lenkomo liya kudla apho, libuthe khona; yaye okunene yena uya kuwadla amasebe aso.+ 11 Xa amasetyana aso omile, abafazi abangenayo baya kuwaphula, bawabase.+ Kuba asisosizwana sinokuqonda okunzulu.+ Ngako oko uMenzi waso akayi kusenzela nceba, noMyili waso akayi kusibabala.+ 12 Kuya kuthi ke ngaloo mini uYehova asivuthulule isiqhamo,+ ukususela kumsinga oqukuqelayo woMlambo+ kuse entlanjeni yaseYiputa,+ nicholwa-cholwe ngamnye ngamnye,+ nina bonyana bakaSirayeli. 13 Kuya kuthi ke ngaloo mini kuvuthelwe isigodlo esikhulu,+ yaye abo batshabalalayo elizweni laseAsiriya+ nabo basasazekileyo elizweni laseYiputa+ ngokuqinisekileyo baya kuza baqubude+ kuYehova entabeni engcwele eYerusalem.+